Dainik Headlines - Page5of 490 - Nepali Khabar from Nepal
महिनावारीको समय महिलाहरुलाई अनेक थरीका शारीरिक र मानसिक समस्याबाट गुज्रनुपर्छ । मांसपेशिमा तनाव, दुखाई, चक्कर आउनु, हातखुट्टा बाउडिनु र गहु्रगोंपन आदी सामान्य समस्या हुन् । महिनावारीको समय महिला पिच्छे सबैको फरक फरक स्थिती हुन्छ । कसैलाई धेरै दुख्ने हुन्छ भने कसैलाई कम दुख्ने हुन्छ । महिनावारीको दुखाई र महिनावारीको दिन …
खाली पेट सक्खर र जीरा पानी खानुका फाइदा यी हुन्
February 23, 2019	Healthy Life 0
काठमाडौं । जीरा हरेक घरमा मसलाका रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसले खानाको स्वाद र सुगन्ध बढाइदिन्छ। अनि सक्खरको मिठासले मिठाईहरूको स्वाद बढाइदिन्छ। यी बहुगुणी जीरा र सक्खर पानीमा मिसाएर खाँदा अनेकौं रोगबाट बच्न सकिन्छ। रक्ताल्पता सक्खर र जीरा हालेको पानी पिउँदा शरीरमा रक्ताल्पताको समस्या हट्छ। यसले रगतमा भएका अशुद्धिहरूलाई पनि …
काठमाडौं । बदाम खान मीठो हुन्छ अनि बदामलाई भिजाएर पछि भुटेर दिनदिनै खाँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेकौं समस्या पनि समाधान हुन्छ। दिनदिनै तीनवटा भुटेको बदाम खाँदा रक्तचाप र मोटोपन नियन्त्रणमा रहन्छ। यसमा भएको मिनरल, भिटामिन र फाइबरले दिमाग तीखो बनाउँछ अनि छाला पनि सुन्दर हुन्छ। स्वस्थ एन्जाइम भुटेको बदाम खाँदा अक्सिजनलाई शरीरसम्म …
February 22, 2019	Healthy Life 0
अनुहारलाई सुन्दर बनाउने एक महत्वपूर्ण अंग ओठ पनि हो । अनुहारका अन्य भाग राम्रो भए पनि ओठ कुरुप छ भने त्यसलाई सुन्दर मान्न सकिदैन। अथवा सुन्दरतामा निखार ल्याउने प्रमुख अंग ओठ नै हो। कतिपय महिला र पुरुषले ओठको कालोपनबाट निकै समस्या भोगिरहेको बताउँछन् । ओठको कालोपन लुकाउन महिलाले लिपिस्टिक वा …
February 21, 2019	Healthy Life 0
अध्ययनहरुले देखाएको छ, काठमाडौंबासीका लागि पर्याप्त अक्सिजन छैन। अर्थात यो उपत्याकामा यति धेरै वायु प्रदूषण छ कि, सास फेर्नका लागि शुद्ध हावा छैन। काठमाडौंमा मात्र होइन, शहरी क्षेत्र अहिले वायु प्रदूषणको चपेटामा छ। शहरवासीहरुको फोक्सोमा शुद्ध हावा पुग्दैन। जबकी स्वस्थ्य जीवनका लागि स्वस्थ्य खानपान जति आवश्यक छ, त्यो भन्दा बढी …
खाएको कुरा नपचेर हैरान हुनुभएको छ भने घरमै यस्ता प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ : – अदुवाको एउटा टुक्रामा केही थोपा कागतीको रस र अलिकति बिरे नुन मिसाएर खाने गर्नुस् । – पुदिना, धनियाँ, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागतीको रस आदि मिसाएर बनाएको ताजा अचार खानासँग खाने गर्नाले पाचनशक्ति बलियो हुन्छ । – …
आज बिहीबार पाथिभरा मातालाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
February 21, 2019	Rashifal 0
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – पहिलेको सफलताले हौसला प्रदान गर्नेछ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। विभिन्न भौतिक साधन प्राप्त हुनेछन्। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। दिउँसोदेखि प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै आम्दानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउन सफल भइनेछ। आम्दानीका नयाँ …
शिव मन्दिरमा भेटियो अनौठो चमत्कारीक सर्प ! हेर्ने मानिसको घुइंचो तपाई पनि एक पटक अबस्य हेर्नुहोला,
February 20, 2019	Dharma 0
शिव मन्दिरमा भेटियो अनौठो चमत्कारीक सर्प ! हेर्ने मानिसको घुइंचो तपाई पनि एक पटक अबस्य हेर्नुहोला, र एक सेयर गर्नुहोला । भालुवाङ्ग प्यूठान रोल्पा सडक खण्डको लालमटिया—३ बगासोतीमा रहेको बगासोती अर्थात् शिव मन्दिरमा केहि दिन पहिले फेला परेको नाग हेर्न आउनेको भिड बढ्न थालेको छ । गत फागुन ५ गते …
२२ वर्षीया सिर्जनाको घटनास्थल मै ज्यान गयो ! रिप लेखेर श्रद्धान्जली दिनुस !!
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । अर्का एक घाइते छन् । दुर्घटनामा देउमाई नगरपालिका–१ की २२ वर्षीया सिर्जना गुरुङको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक अमिर वर्देवा घाइते भएका हुन् । पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका–१ नाङ्खोल्याङ निवासी अमिरको उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था गम्भीर …
आज बुधबार पाथिभरा मातालाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
February 20, 2019	Rashifal 0
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन केही चुनौतीसँग जुध्नुपर्नेछ। तापनि मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ। पढाइमा गुरुजनको मार्गदर्शन उपयोगी हुनेछ। सहपाठीहरू पछि पर्नेछन् भने मिहिनेतले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। …